အဂတိ တားဆီးကာကွယ်ရေး နှစ်အလိုက် စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်နေဟုဆို - Yangon Media Group
အဂတိ တားဆီးကာကွယ်ရေး နှစ်အလိုက် စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်နေဟုဆို
အဂတိတားဆီး ကာကွယ်ရေးကို နှစ်အလိုက်စီမံ ချက်များချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ကပြောသည်။ မေ ၅ ရက်၊ နေပြည်တော် Grand Amara Hotel တွင် ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂအဂတိ တိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်း (UNCA) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဒုတိယစက်ဝန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Country Repor ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ၌ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ ၎င်းကအထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ယခု(UNCA) အကောင် အထည်ဖော်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဒုတိယစက်ဝန်းတွင် ကွန်ဗင်းရှင်းပါ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရယူခြင်းသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီးကွန်ဗင်းရှင်း ပြဋ္ဌာန်းချက် အပေါ်လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သုံးသပ်ကြရန်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတား ဆီးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးရေး အစီအစဉ်များ ဟောပြောပို့ချခြင်း အစီအစဉ်များ၊ အသိပညာပေးရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းတိုများ၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှု များစသည်တို့ကို ပြည်သူများထံ ရောက်သည်အထိလုပ် ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင့်ဝတ်ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့်အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂ဝ၁၈-၂ဝ၂၁)ကိုချမှတ်ပြီးနှစ် အ လိုက်စီမံချက်များချမှတ်၍ အ ကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ Political Will အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ယခုအခါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဌာနများတွင်အဂတိလိုက်စားမှုတား ဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ စတင် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းက သက်သေပြုလျက်ရှိသည်ကို ကျေနပ်ဖွယ်မြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးအောင်ကြည်ကပြောသည်။
ယင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအ နေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းတွင်သာမက နိုင်ငံတကာအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ပါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲသည် ကုလသမဂ္ဂ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (UNCA) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံး သပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယစက်ဝန်းတွင် ကွန်ဗင်းရှင်း၏အခန်း (၂) နှင့်အခန်း (၅)တို့အပေါ်မြန်မာ နိုင်ငံ၏ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ကြကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေး ကျန်အစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုရရှိအော??
တိုင်းရင်းသားကျေးရွာကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တင်ဒါခေါ်မည်
ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲတော် ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ခွေးလေခွေးလွင့်များကို ရှင်းလင်းရန် ငွေကျပ် ၁၇၈ သိန်း အသုံးပြုမည်
လစာ သုံးဆပေးပြီး မက်ဆီကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ဆိုခြင်းကို မန်စီးတီး ပယ်ချ
မြန်မာဘက်သို့ အွန်လိုင်း ဘောလုံးလောင်းကစား ထပ်ဆင့် လွှင့်စက် တပ်ဆင်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသားကို ??